वेगनास तालबाट ३ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने जाइकाको निस्कर्ष | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
वेगनास तालबाट ३ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने जाइकाको निस्कर्ष
काठमाडौं, साउन ४ गते । जापानी सहायता नियोग (जाइका)ले कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सुन्दरडाँडास्थित बेगनास तालमा ३ सय मेगावाटको पम्प स्टोरेज बनाउन प्राविधिक रुपमा संभव भएको निस्कर्ष निकालेको छ ।
यसअअघि विद्यूत प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर करिव एक सयदेखि तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो ।
प्राधिकरणको सोही रिपोर्टको आधारमा नै हालै जाइकाको एक टोलिले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । यो पम्पस्टोरेजको जिम्मा लिएका तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार थिकेका अनुसार गत आइतबार मात्रै जाइकाको ४ जनाको टोेलिले यो आयोजनाको स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको हो ।
थिकेले भने, ‘जाइकाको टोलिले पम्प स्टोरेज बनाउन प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको देखाएको छ, अब यसको आर्थिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने वा नहुने भन्ने अध्ययन गर्न बाँकी छ ।’
जाइकाले यसको अब आर्थिक हिसाबले उचित छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्न बाँकि छ ।
थिकेका अनुसार जाइकाका एसिया प्रशान्त निर्देशक पाके इचिको नेतृत्वमा यो टोलि आएको थियो । ४ जनाको टोलिमा जाइकाको परामर्शदाता कम्पनी पे पावरबाट दुई जना इन्जीनियर पनि रहेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको अत्यधिक माग हुने पिक आवरमा करिव ४ घण्टा चलाउने गरी पिक स्टोरेज बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । आयोजना निर्माण भएमा यसले पिक आवरको विद्युत माग पूरा गर्ने ब्याट्रीको रुपमा काम गर्ने छ ।
तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि पनि पिक आवरको विद्युत मागलाई पूरा गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणले पिक स्टोरेज निर्माण योजना अगाडि बढाएको हो । थिकेका अनुसार बेगनास र रुपा तालबीचमा रहेको ५७ मिटर प्राकृतिक हेडलाई प्रयोग गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । यो हेड प्रयोग गरी आयोजना निर्माण गर्न सम्भव भएको जाइकाको भनाई छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार जम्मा भएको पानीलाई अफ आवरमा पम्प गरी पुनः बेगनास तालमै खसाल्नु पर्दछ । जसले गर्दा प्राकृतिक रुपमा तालमा असर देखिदैन ।
केही वर्षअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिभिल तथा जियोमेटिक्स विभागका प्रा. डा. रमेशकुमार मास्के नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले बेगनास रुपा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाबाट १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो ।
अध्ययनका अनुसार आयोजनाबाट पिक आवरमा पाँच घण्टा एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने छ । साथै विद्युत उत्पादनपछि रुपा तालमा जम्मा भएको पानी फेरि बेगनासमा फर्काउन पम्प चलाउन करिव १ सय २५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेछ ।- अनलाइनखबर
7/19/2017 02:59:00 PM